किन राखियो पाइलटलाई झुक्याउने नाम ? गलत नाम गलत परिणाम ! जुनसुकै पाइलट सजिलै झुक्किन सक्छ — Riddle Nepal
किन राखियो पाइलटलाई झुक्याउने नाम ? गलत नाम गलत परिणाम ! जुनसुकै पाइलट सजिलै झुक्किन सक्छ
म एउटा अनुभव सेयर गर्न चहान्छु । मैले सन् २०१३ तिर कतारमा एउटा स्पेनिस कम्पनीको लन्ड्रीमा (Pressto) अप्रेशन सुपरभाइजरको जागिर गरेको थिएँ । जँहा दिनमा १२ सयवटा सम्म कपडा आउँथ्यो । मानौँ, एक ग्राहकको १० वटा कपडा छ भने हामी एउटै नम्बर राखेर मार्किङ् गर्थ्यौँ ।
अनि ड्राइक्लिनिङ्ग र प्रेसिङ सकेपछि प्याकिङ्गको बेला मात्र नम्बर हेरेर कपडा छुटयाउथ्यौँ । यो लन्ड्रीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । १२ सय वटा कपडा एक सय जति ग्राहकको हुन्थ्यो । जब प्याकिङ्ग गर्ने कपडा पट्याउन सुरु गर्थ्यो तब कपडामा हरेक दिन एउटा न एउटा लफडा हुन्थ्यो ।
अर्थात्, ३९६ को कपडा ६३९ को प्याकेटमा पर्थ्यो । ७३७ को कपडा ३७३ मा पर्न जान्थ्यो । ९६९ को कपडा ६९६ मा पर्न पुग्थ्यो । त्यसपछि ग्राहकले मेरो महँगो कपडा हरायो भनेर खुबै झगडा गर्थे।
कतिपय बेला हामीले ग्राहकले भनेजति रकम क्षतिपूर्ति दिनुबाहेक विकल्प हुन्नथ्यो । यस्ता उस्तै लाग्ने नम्बरमा नझुक्किनु भनेर जति सम्झाए पनि मान्छेको दिमाग न हो झुक्किइ हाल्थ्यो ।
जसलाई हामी मानवीय त्रुटी (human error) पनि भन्न सक्छौँ । अन्त्यमा ग्राहक र हाम्रा मालिक दुवैको गाली खाँदा खाँदा हैरान भएर जागिर नै छोड्ने निर्णयमा पुगेँ । किनकी हामीसँग नम्बरिङ गर्नुको विकल्प थिएन ।
नम्बरिङबाट भोगेको समस्या भोगेका हामीले नेपालको एरपोर्टको धावन मार्गको त्यस्तै ‘कन्फ्यूजन नम्बर’ राखेको पहिलो चोटी सुन्दा सारै अचम्म लाग्यो । ०२ र २० ले जोकसैलाई झुक्याउँदैन र ? बरु साइड ए र साइड ए राख्न सकिन्थ्यो होला । साइड ०१ र ०२ राख्न सकिन्थ्यो होला वा कोटेश्वर साइड र बौद्ध साइड राख्न सकिन्थ्यो होला ।
प्राविधिकरुपमा मिल्छ मिल्दैन थाहा भएन, तर यो नाम एकदम गलत नै हो, यसलाई तत्काल सच्चयाउन जरूरी छ । यदि कसैका दुई छोरा छन् भने एउटाको नाम सुदन र अर्काको नाम सुजन राख्दा पाहुना हरेक चोटी आउँदा झुक्किन्छन् ।
त्यसकारण रन वेको नाम ०२ र २० एकदमै गलत भयो । यसलाई सुधारियोस । नत्र फेरि पनि पाइलट झुक्किएर ०२ बाट ल्यान्ड गर भन्दा २० सोचेर अर्कैतिरबाट ल्यान्ड गरेर दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न । यसका साथै नेपालका विमानस्थलको धावन मार्ग पनि फराकिलो र बलियो बनाइनु जरुरी छ । अन्नपूर्ण पोस्ट बाट